အန်းဒရွိုက် N က: Google က OS ကို၏အနာဂတ်ဖော်ပြ - သတင်း Rule
အန်းဒရွိုက် N က: Google က OS ကို၏အနာဂတ်ဖော်ပြ
ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီဘဝ optimization နှင့်အတူရရှိနိုင်အစောပိုင်းအား developer preview ကို, ပိုမိုမြန်ဆန် app ကို switching, Multi-ပြတင်းပေါက်နှင့်ညဉ့် mode ကို
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အန်းဒရွိုက် N က: Google က OS ကို၏အနာဂတ်ထုတ်ဖော်ပြသ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 10th မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 12.36 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ကဖြန့်ချိခဲ့သည် စောစောစီးစီး preview ကို split-screen multitasking ကိုအတူ - အန်းဒရွိုက် N က - ၎င်း၏မိုဘိုင်း operating system ၏နောက်လာမည့်ဗားရှင်း, တိုးမြှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းကြားစာများ.
အများအားဖြင့် Google ကကုမ္ပဏီရဲ့ developer conference မှာအန်းဒရွိုက်၏ဗားရှင်းအသစ်တစ်ဦးအား developer preview ကိုဖြန့်ချိ, Google I / O, မေလရဲ့အဆုံးမှာ. ဒါဟာသူတို့ရဲ့ app များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အသစ်အစိတ်အပိုင်းများဆောက်လုပ်ဖို့ developer များအချိန်အောက်တိုဘာလထဲမှာစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူမှ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်တို့ရှေ့မှာ Android ကိုအတွက် features အသစ်၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုပါရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲင်.
ဒီနှစ်, သို့သော်, Google ကအစောပိုင်းနှစ်လစတင်ခဲ့သည်, အသုံးပြုသူများသည် features အသစ်စမ်းသပ်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ developer များနှင့် beta ကိုတည်ဆောက်အတူ.
အန်းဒရွိုက်၏ဦးခေါင်းကို, Hiroshi Lockheimer, ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာအစဉ်အဆက်ထက်အစောပိုင်းမှာင်, ကြိုးစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူကန့်နှင့်သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးရန်အဘို့အကျနော်တို့နည်းလမ်းများတိုးချဲ့ဖွင့်. ငါတို့သည်သင်တို့အထဲကစကားကိုနားထောငျနှငျ့သငျနှငျ့အတူ platform ပေါ်တွင် iterate ချင် - က Android ကိုအားကောင်းစေသည်ယျ "။
Google ကအစောပိုင်းက preview ကို သာ. ကြီးမြတ်စမ်းသပ်ခွင့်ပြုပါကအစောပိုင်းကထုတ်လုပ်သူမှအသစ် Android ဗားရှင်းများကိုပါစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်. အများဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိစမတ်ဖုန်းများအတွက် Android ရဲ့အသစ်ဗားရှင်းလွှတ်ပေးရန်ရန်အဘို့အဒါဟာလပေါင်းများစွာကြာ. ဤသည်ကို Google ရဲ့ Nexus စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များလလောက်ကို Android ၏ဗားရှင်းအသစ်ပြေးတစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်ကျန်ကြွင်းသောဆိုလိုသည်.
ဒီအသစ် preview ကိုမဟာဗျူဟာလည်းကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးပြုမိုဘိုင်း operating system ထဲမှာပြောင်းလဲနေတဲ့ယျမှာအစောပိုင်းကြည့်ရှုပေးသည်.
တစ်ဦးက Nexus 6P နှင့် Pixel C ပေါ်တွင်ပြသမှာ Android N က Multi-window ကို multitasking. ဓါတ်ပုံ: Google က
အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှု Multi-Window လို့ခေါ်တဲ့ split-screen multitasking view ၏နိဒါန်းဖြစ်ပါသည်, app နှစ်ခုကိုတဦးတည်း screen ပေါ်မှာ run ခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့. ထိုသို့သောက Samsung အဖြစ် Android စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီတစ်ခုခုရဲ့, ယခုမူကားအန်းဒရွိုက် N ကိုသို့ဖုတ်လာကြလိမ့်မည်.
အဆိုပါ app များကို by-side ဘက်မှာ-သို့မဟုတ်အခြားအထက်တဦးတည်းကို run နိုင်ပါတယ်, အရွယ်အစားပြောင်းသည့်အုပ်စုခွဲဗဟို slider ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူ, Windows နဲ့မိတ်ဆက် Microsoft ရဲ့ split-screen mode ကိုနဲ့တူတာ 8 တွင် 2012 နှင့် Apple ၏ iOS9ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြန့်ချိ.
Android app များမှုကြီးလျှော့ချသုံးပြီးတည်ဆောက်ထားကြသည်, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား Agnostic format နဲ့, အရာအများစုကို feature အသစ်နှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်. ကစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်, အဆိုပါ feature ကိုအဓိကအားထိုကဲ့သို့သော Google ရဲ့ Pixel ကို C အဖြစ် phablet နှင့် tablet များအပါအဝင်ပိုကြီးတဲ့ devices တွေကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်.
ပိုမိုမြန်ဆန် app ကို switching
အသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဆ-ကိုထိပုတ်ပါရန်မကြာသေးခင်ကအသုံးပြုသော apps များခလုတ်ကိုမကြာသေးမီကအသုံးပြုသော apps များစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲယခင်အသုံးပြုခဲ့ app ကိုပြောင်းရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်, apps များအကြားလမ်းညွှန်အရှိန်မြှင့်.
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် zoom ကို
အဆိုပါ zoom ကို setting ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကအားလုံးကိုကျုံ့ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးရှင်းလင်းအမြင်အဘို့အပိုကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုအောင်သို့မဟုတ် screen ပေါ်မှာပိုပြီး fit မှခွင့်ပြု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အန်းဒရွိုက် N ကိုလုပ်ကွက်များအလင်း၏အပြာလှိုင်းအလျားနိုးကလူစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်ဖုန်းများတားဆီးကိုကူညီမယ့်ညဥ့် mode ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ်. third party က Android app များကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအနီရောင် filter ကို overlay ကိုသုံးပြီးခဏအလားတူတစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်ပါပြီကြောင့် Apple က iOS ကို၎င်း၏လာမယ့်ဗားရှင်းစီစဉ်ထားသည်ဟုတစ်ခုခုရဲ့.
အသုံးပြုသူများသည် Android N ၏သစ်ကို zoom ကို slider ကို အသုံးပြု. screen ပေါ်မှာ icon များနှင့်စာသား၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်, အရာပေါ်မယ့်အဘယ်အရာကိုမြင်မှချဲ့အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်သောသူတို့အားကူညီကြမည်.
အသစ်အကြောင်းကြားစာအရိပ်အမြန် setting များကိုတစ်ထိပ်တန်းအတန်းရပါလိမ့်မယ်, သောအသုံးပြုသူပြောင်းလဲနိုင်သည်, နှင့်အဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားစာများ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အန်းဒရွိုက် N ကိုအတူတကွတစ်ခုတည်း app ကိုကနေအုပ်စုတစုအသိပေးချက်များစွမ်းရည်အတူပါလာလိမ့်မယ်. app အချို့ပြီးသားဒီအလုပျ, Google ရဲ့ Gmail app ကိုအပါအဝင်, သောသူတို့သည် လာ. အသုံးပြုသူများအသိပေးချက်များကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးအဖြစ်ကသူတို့ကိုပယ်ချဖို့သူတို့ကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုအဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအတူတကွစုဆောင်း.
Google ရဲ့အမြန်-ပြန်ကြားချက်အင်္ဂါရပ်, ယင်း၏ဟန်းအောက်နှင့် Messenger ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ apps များနှင့် Android Wear အတွင်းရရှိနိုင်, ဒါ့အပြင်အန်းဒရွိုက် N ကိုအတွင်း standard feature အဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, အသုံးပြုသူများ app ကိုရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲဖြောင့်အကြောင်းကြားစာကိုအရိပ်ထဲကနေမက်ဆေ့ခ်ျမှဖြေကြားမှုများအထဲက Bash ခွင့်ပြု.
Doze ၏ဗားရှင်းအသစ်မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားသည့်အခါဘက်ထရီသက်တမ်းရှည်အောင်ကူညီကြမည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Android မှာ 6.0 Marshmallow Doze လို့ခေါ်တဲ့ feature ကိုအသုံးပြုပြီးဘက်ထရီထိရောက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ခုန်လုပ်, တစ်နိမ့်ပါဝါပြည်နယ်သို့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ထားမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်ခဲ့တယ်ကြောင့်ရွေ့လျားမရသောအခါ device ကိုနိုးထနိုင်သောအရာကိုကျော်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်လုယူသော.
ဒါကဖုန်းကိုတစ်စားပွဲခုံပေါ်တင်လိုက်တယ်နှင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ထိမိမခံခဲ့ရသည့်အခါကအလွန်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ဆိုလို, ကြားကာလသတ်မှတ်ထားဖို့ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက် access ကိုအဖြစ်ကန့်သတ်သောအရာတို့ကို.
မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားအခါ Android N ကိုအလုပ်လုပ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်တိုးချဲ့နေသည်ပေမယ့်ဖုန်းရွေ့လျားမှု၌တည်ရှိ၏ - ဥပမာအားဖြင့်တစ်အိတ်ကပ်ဒါမှမဟုတ်အိတ်၌ – အရာဘက်ထရီသက်တမ်းအပေါ်သိသိသာသာအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသင့်.
အန်းဒရွိုက် N ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဂျာဗားက Android Runtime တစ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုရှိပါတယ် (အတတ်ပညာ), သောဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ app တွေကိုပြေး. ဒါဟာပိုမြန်ပြီးပိုထိရောက်ဖြစ်ပါသည်, apps များ optimization တဲ့ကာလမလိုဘဲတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်မွမ်းမံပါမည်အဓိပ္ပာယ်. ဤသည်ကိုအလွန်ကို Android နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အခြားအအဆင့်မြှင့်တင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျှော့ချသင့်တယ်.
Google ရဲ့ Project မှ Svelte ကိုလည်းလျော့နည်းသိုလှောင်မှုအာကာသကိုတက်ယူနိုင်အောင်အန်းဒရွိုက်၏အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချအပေါ်လုပ်ဆောင်နေခဲ့တာနဲ့အနိမ့်ပါဝါကိရိယာများပေါ်တွင် run နိုင်ပါတယ်, အရာ apps များနှင့်မီဒီယာများအတွက်ပိုပြီးအာကာသဆိုလိုသင့်တယ်.
developer များက Android N ကို၏ beta ကိုဗားရှင်းထွက်ကြိုးစားရန်နိုင်ပါတယ်ရှာဖွေနေ Google ကနဲ့ Nexus device ကိုစာရင်းသွင်း လေထုကျော် update လုပ်ဖို့, နှင့် Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုမှပြန်လာနိုင်ပါတယ်6တူညီသောလမ်းအတွက် Marshmallow.
သူများသည် Google ရဲ့ Nexus ထုတ်ကုန်နွေရာသီအတွက် Android ကို N ကိုလက်ခံရရှိရန်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကထွက်တွန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် run မ, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အတွက်ဖြစ်လတံ့သော 2017.
Android မှာ 6.0 Marshmallow: 21 Google ရဲ့ OS ကို update ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အကြံပေးချက်များ
25181	5 အက္ခရာ, Android မှာ, အပိုဒ်, Google က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, phablet, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Software များ, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
←7Virtual Reality ဘို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အသုံးအမှုများ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဘဝအသက်တာရှိပါတယ်? →